Jobs in Myanmar - Myanmar Job - Machine Operator
Job Ref No.: MJV-272
For Mingalardone - Carry out production, inspection, packing & machine operation duties - Set up machinery & ensure all materials are readily available - Effectively monitor production equipment - Assist the shop technicians & materials clerk as necessary - Perform appropriate duties as assigned by management - Maintainasafe & clean work space - Follow established safety rule & regulation. - Overtime Allowances - Meal Allowances
စက်ကြီးမောင်းနှင်မှုနှင့်ပတ်သပ်၍ အနည်းဆုံး (၃) နှစ် အတွေ့အကြုံရှိရမည်။ - စက်ကြီးမောင်းနှင်မှုနှင့်ပတ်သက်သော ဗဟုသုတများ၊ ပြင်ဆင်မှုများ နှင့် Safety ပိုင်းဆိုင်ရာ အတွေ့အကြုံများရှိရမည်။ - အဖွဲ့အစည်းနှင့် သင့်တင့်လျောက်ပတ်စွာ လုပ်ကိုင်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ -လူမှုဆက်ဆံရေး ပြေပြစ်ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
အထက်တန်းအောင် (သို့မဟုတ်) သက်ဆိုင်ရာဒီပလိုမာတစ်ခုရရှိထားသူဖြစ်ရမည်။
Email - linnltthein66@gmail.com
ADMIN CUM ACCOUNTANT STAFF